राजु मास्टरः भाग १
101 News & Stories
Current Affairs, Health Tips, Stories, Love Stories, Sex Stories, Facebook Tips, Youtube tips,
१०१ न्यूज र कथाहरू
in: Novel Rajumaster
धेरै वर्ष अगाडीकाे कुरा हाे, नेपालकै अर्घखाची जिल्लामा एउटा सानाे गाउँ थियाे, पाहाडी भेगमा भए पनि त्याे गाउ अति सुन्दर थियाे । तर त्याेे गाउमा बस्ने मानीसकाे अार्थीक अवस्था भने जिर्ण अवस्थामा थियाे । त्याे गाउका मानिसहरू पनि सारै मिलनसार थिए । त्याे गाउमा कसैकाे मकै बारी खन्न हाेस वा काेट पर्व नै मनाउन किन नहाेस, त्याे गाउका सबै मानिसहरू मिलेर खुसी खुसी गर्दथे ।
नेपालकाे प्रकृतीले घेरेकाे त्याे सानाे गाउमा एउटा ठूलाे परिवार थियाे । त्याे घरमा अामाबुबा सहित ६ जना छाेराछाेेरी बस्ने गर्थे । त्याे परिवारकाे सम्पती भने त्यती धेरै थिएन । त्याे घर खेतीकिसानीमा मात्र धानिएकाे थियाे । बिस्तारै समय बित्दै जादा त्यहा भएकाे खेती ले घर धान्न धाै धाै भएपछि, बुबाले अब बटाैली झर्ने निधाे गर्नुभयाे ।
गाउमा भएका अाफ्ना सबै खेत बेचेर बुबा मधेस झर्नु भयाे । खेत बेचेर अाएकाे पैसाले बुबाले सस्ताेमा अलिकती जमिन किन्नु भयाे र एउटा सानाे झुपडी तयार पारेर पहाडमा भएका अाफ्ना सबै परिवारलार्इ मधेस झार्नु भयाे । समस्याकाे समाधान भने अझै भएकाे थिएन । अतः अार्थीक अभाव पुरा गर्नकाे लागी बुबा अाफू लाहुरे बन्न भारत लाग्नु भयाे ।
यता घरामा भने अब एउटी अामा र ६ जना छाेरीछाेरी, जस्मा ३ भाइ छाेरा र ३ बहिनी थिए । छाेराछारी हुर्कदै थिए, जेठाे छाेराे साेनु कक्षा १० पढ्दै थियाे, माहिलाेे छाेरा राजु ५ कक्षा र कान्छाे छाेराे चक्रू भने अझै काखमा हुर्कदै थियाे । छाेरी तर्फ रिता पहिलाे सन्तान पनि थिइन्, त्यसैले उन्लार्इ पढाइमा भन्दा पनि घरकाे चुलाे चाैका र मेला पातमा ब्यस्त रहन बाध्य भइन, माहिली छाेरी रूपा भने अलि साेझी थिन्, पढ्ने लेख्ने अवसर पाएपनी उनकाे त्यती मन हुदैनथ्याे र कान्छी छाेरी निमा भने अलि टाठीबाठी थिइन।
बुबा लाहुरे सिपाही भएपछि घरकाे सारा काराेबार साेनुकाे काधमा अाएकाे थियाे । तर जबरजस्ती भिराइएकाे त्याे जिम्मेवारी साेनुलार्इ पटक्कै चित्त बुझेकाे थिएन । अर्धबैसे त्याे उमेरमा, साथीभार्इकाे लयलयमा लागेर साेनु एकदिन विद्यालय जान्छु भनेर हिडेकाे मान्छे, रात नपर्दै नेपालकाे सिमा कट्न भ्याएछ । घरमा एकछिन खाेजीनिधी भयाे, साथीभार्इ सगँ साेधपुछ भयाे र घरभरी अब रूवाबास मात्र चल्याे । त्याे समयमा फाेन पनि कसैसगँ थिएन, साेधाै भने कस्लार्इ साेँधु र खाेजाै भने पनि कहाँ गएर खाैज्नु, अब सारा परिवार अलपत्र थियाे । लाहुरमा जागिर खान गएका बुबालार्इ नि छाेराे बेपत्ता भएकाे खबर पठाइयाे ।
छाेरा बेपत्ता भएकाे खबर पाएकाे एक हप्तामै बाबुले जागिर छाेडेर घर फर्किहाले । छारीहरूलार्इ घरकाे काराेबार चलाउन दिने चलन थएन र माहिलाे छाेराे अझै सानाे भएकाेले बाबु जागिर छाेडेर घर अाउन बाध्य भएका थिए । सानु बेपत्ता हुदा घरमा सबैजना चिन्तित थिए, मेरेकाे बाचेकाे केहि खबर थिएन । अब बाबु पनि स्वदेसमै बसेर काम गर्ने निधाे गरे ।
साेनु बेपत्ता भएकाे ७ वर्ष बितेकाे थियाे, घर अहिले खती किसानीले नै चलि रहेकाे थियाे, रितुकाे बिहे पनि भैसकेकाे थियाे । राजुले पनि अाइ.ए सकाएर बसेकाे थियाे । गाउ नजिकै विद्यालय नभए पनि धेरै टाढा गएर अाफ्नाे शिक्षा हासिल गरेकाे थियाे । समय अत्यन्तै परिवर्तनशिल थियाे, अाइ.ए पास गरेपनि राम्राे जागिर पाउन सकिदैनथ्याेे । जमाना राम्राे मान्छे भन्दापनि अाफ्नाे मान्छेलार्इ जागिर दिने चलन थियाे । राजुका साथीहरू पनि राम्राे जागिर नपाउने लक्षण भएपछी सबैजना वैदेशिक राेजगाकाे लागी ऋिण खाेजेर विदेश जान थालेका थिए । अाइ.ए पढेकाे छाेराले अब जागिर गरेर धेरै पैसा कमाउछ भन्ने अाश गर्न थालेका थिए । अरूकाे छाेराछाेरीले बिदेशबाट हजाराै रूपैया पठायाे रे भनेकाे सुन्दा बाउअामाले अब राजुलार्इ पनि बिदेश जान कर लगाइएकाे थियाे । तर राजु भने अलग्गै साेच्दथ्याे, बिदेश गएर पैसा कमाएर नेपाल पठाउनु भन्या नपाली भूमिकै अपमान गर्या जस्ताे मान्दथ्याे, उस्ले अाफ्नाे देशलार्इ धेरै माया गर्दथ्याे । राजुले स्वदेसमै काम गर्छु भनेर धेरै ठाउँमा जागिर खाने काेसिस गर्याे तर त्याे जिल्लामा उस्ले भने जस्ताे जागिर कतै पाएन । अब जागिर अर्काे जिल्लामा गएर भएपनि खानुु पर्ने थियाे र घरकाे अार्थीक बाेझ हल्का पनि गराउनु । बहिनीहरूकाे नि बिहे गर्न बाकी नै थियाे, भाइलार्इ राम्राे ठाँउमा पढाउनु पर्ने पनि थ्याे । बाबु अामा पनि अल्ली बुढाे भैसक्नु भएकाे थियाे, खेतबारीमा पनि मन लगाएर काम गर्न सक्न छाेड्नुभएकाे थियाे । राजुले साेच्दासाेच्दै एउटा जुक्ती निकाल्याे, अाखिर उसलार्इ जिल्ला छाेड्नु नै पर्ने भएपछि उसले मुगु जस्ताे दुर्गम ठाउमा गएर पढाउने साेच गरायाे । उसेले धेरै सिफारिस गरेपछि उस्ले मुगुकाे एउटा गाउमा ३ कक्षा सम्म भएकाे विद्यालयमा अस्थार्इ शिक्षकमा नियुक्ती भयाे । घरमा पनि अाखिर छाेराले जागिर पायाे भनेर मख्ख थिए ।
कर्णाली जिल्ला जस्ताे दुर्गम ठाउमा गएर ३ कक्षा सम्म मात्र पढाकाे हजार रूपैया पाउथ्याे । त्याे बेलामा हजार रूपैयाले अढाइ महिना जति घरखर्च सजिलै चल्दथ्याे । तर पैसा त्यत्राे भएर के गर्नु, मुगु जस्ताे ठाउँमा पुग्नु नै ठूलाे सङ्घर्ष गर्नु पर्दथ्याे । बाटाेघाटाे नभएकाे त्याे समयमा मुगु जानकाे लागी बुटबलबाट करिब १० दिन जति हिडेर जानु पर्दथ्याे ।
पहिलाे पटक राजु कर्णाली पुग्दा त्यहाकाे माहाेल नै बेग्लै थियाे । जागिरकाे पहिलाे दिन उ विद्यालय त पुग्याे तर त्यहा पुग्दा उसले न त विद्यार्थीलार्इ भेटायाे न त कुनै शिक्षकलार्इ नै । उसले भेट्याे त केवल चाैरीगार्इ चराउन अाएका गाेठाला मात्र । विद्यालयकाे नाममा एउटा सानाे ढुङ्गाले बनेकाे छाप्राे थियाे । यस्ताे विचित्र ठाउँमा उ पढाउन भनेर पुगेकाे थियाे । त्यस पछि उस्ले सुरूमा गएर पिउनलार्इ भेट्याे । उस्लार्इ त्यहाँ पिउनले भन्याे सबै विद्यार्थी यार्साकाे खाेजीमा गएकाेले विद्यालय बन्द गरिएकाे रहेछ । करिब १५ दिन पछि विद्यालयका सबै शिक्षक शिक्षिकाहरू उपस्तिथ भैसकेका थिए, राजुले पनि सबैसगँ भेट गर्याे । यार्साकाे सिजन पनि सकिन अाटेकाे थियाे । अब विद्यार्थी अाउछन र पढाउन पाइन्छ भन्ने साेच्याे तर जम्मा २-४ जना विद्यार्थी मात्र विद्यालय अाएका देखिए । दृश्य हेर्दा अचम्म लाग्दाे थियाे, चार जना विद्यार्थी पढाउनकाे लागी पाँच जना शिक्षकहरू नियुक्ती भएका थिए । नेपालकाे त्याे बेलाकाे शिक्षा त्यती सम्म दयनिय थियाे । याे दृश्य राजुकाे लागि नाैलाे थियाे तर अरू शिक्षकलार्इ यस्काे बानी परिसकेकाे थियाे । वरिपरि ५ गाउँका बालबालिकालार्इ पढाउनकाे लागी स्थापना भएकाे विद्यालय थियाे त्याे । त्यहाँ भएका शिक्षककाे काम पनि तलब पचाउनकाे लागी मात्र बसेकाे जस्ताे देखिन्थ्याे । पहिले देखी जस्ताे चलेकाे थियाे त्यस्तै चल्न थाल्याे । करिब २ महिना जति त्यस्तै चल्याे ।
असार मसान्त अाउन अाट्याे, अब तलब बाढ्नकाे लागी हेडमास्टर पनि टुप्लुक्क अाइपुग्याे । सबैलार्इ तलब खान हतार थियाे । राजुकाे त झन याे पहिलाे कमाइ थियाे, उस्काे अनुहारमा बेग्लै खुसी देखीएकाे थियाे । सबैले पालैपालाे अाफ्नाे तलब बुझ्दै थिए, तर जसरी जसरी राजुकाे पालाे नजिकिन्थ्याे उस्काे मनमा उदासी छाउदै गयाे । अब उसलार्इ त्याे तलब लिन अलि अप्ठ्याराे महसुस भयाे । काम भने एउटा माखाे मार्या थिएन, मात्र दिनभरी चाैरमा बसेर घाम तापेकाे चार हजार जति बुझ्दै थियाे ।
तलब बुझेपछि उ घर जाने तामझाम मिलाउन थाल्याे । उसकाे घरमा अब राेपार्इ चल्दै थियाे, उ घर जान अावश्यक थियाे, त्यसैले उसले करिब एक महिनाकाे बिदा लिएर घर तिर लाग्याे । घर पुग्न कम्तीमा पनि ८ दिन लाग्दथ्याे । त्याे घर पुगुञ्जेल उस्काे मनमा त्याे पैसाका कुरा खेली रहयाे, काम नगरी त्यसरी तलब खादा उस्लार्इ नरमाइलाे लागेकाे थियाे । राजु देशलार्इ खुब धेरै माया गर्ने मान्छे थियाे तर उ अहिले देशद्राेही नै हाे कि जस्ताे महसुस गर्दै थियाे । साच्ची नै बिना काम देशकाे ढुकुटी रित्याउन खाज्नु देशकाे लागि कलंङ्क नै हाे । उसलार्इ याे कुराले घर पुग्दा सम्म खुब धेरै पिराेल्याे ।
मुगुबाट हिडेकाे ९ दिनकाे राती उ घरमा अाइ पुग्याे । अाफ्नाे दाजुलार्इ देखेर चक्रू, रूपा र निमा निकै खुसी देखिन्थे । अामा पनि अाफ्नाे छाेराे अायाे भनेकाे सुन्दा फुक्दै गरेकाे अागाे छाेडेर छाेराेकाे मुख हेर्न अतालिन । तर बाबुकाे अनुहारमा भने कुनै खुसी देखिदैन थियाे । सबैसगँ ढाेग भेट भए पश्चात, अामाले खाना पस्किनु भयाे र सबैलार्इ खान बाेलाउनु भयाे । अाज सबैजना सगँ बसेर खाना खादै थिए, रमाइलाे क्षण थियाे तर पनि साेनुकाे अभाव महसुस भयाे । अामाले सधैजस्तै अाज पनि साेनुलार्इ सम्झेर तुरूक्क अासुँ झार्नु भयाे ।
खाना खार्इसके पश्चात बुबा अाँगनमा बसेर हावा खादै हुनुन्थ्याे, अामा भान्सामा पाेछा लगाउदैै हुनुहुन्थ्याे, रूपा र निमा मिलेर भाडा माेल्दै थिए अनि चक्रू चाँहि टुकिकाे छेउमा बसेर अाफ्नाे पाठ पढ्दै थियाे । राजु बाबुकाे छेउमा गएर लामाे सुस्केरा हाल्दै थुचुक्क बस्याे ।
"मुगु कस्ताे रैछ त ?", बाबुले साेध्नुभयाे ।
राजु, "हेर्दा त रमाइलाे छ बाबा ।"
"जागिर कस्ताे लाग्याे त तलार्इ ?" बाबुले फेरी साेध्नुभयाे ।
राजु झसगँ भयाे र एकहाेराे बाबुलार्इ हेरेर टाेलाउन थाल्याे । अब अाफ्नाे बाबुलार्इ के भन्ने भनेर साेच्दै थियाे ।
त्यतिकैमा फेरी बाबुले भन्नु भयाे, जागिर मन परेन भने विदेश जा ।
राजुले बाबुकाे याे कुरा सुनेर स्तब्ध भयाे । उ अब केही बाेल्न नि सकेकाे थिएन । बाबुले अझै पनि उसलार्इ बिदेश नै खाेजेका रहेछन । तर राजुले जादिन भनेर साफ इनकार गरिदियाे ।
अामा (नजिकै अाएर), दिन भरी हिड्दा थाकेकाे हाेलास हिन सुत्न ।
राजु पनि चुप लागेर सरासर भित्र गएर बिस्तारामा पल्टियाे ।
Thanks for visiting blog. Let us approve it.
We are not trying to update you with daily news headline but we are trying to provide you relevant news which may be useful for you in future also. Please visit this site time to time. Thank you.
Twitter_Raja. Powered by Blogger.
वर्षायामकाे माैसम थियाे, मिर्मिरे बाट काठमाडाैंमा ठूलाे पानी परीरहेकाे थियाे । म हाेस्टेल बसेर अाफ्नाे पढार्इ अगाडी बढार्इ रहेकाे थिए । बि...
धेरै वर्ष अगाडीकाे कुरा हाे, नेपालकै अर्घखाची जिल्लामा एउटा सानाे गाउँ थियाे, पाहाडी भेगमा भए पनि त्याे गाउ अति सुन्दर थियाे । तर त्याेे ग...
पिम्पल्स बाट मुक्त हुने उपायहरू
के तपाई पिम्पलस देखी पिडित हुनुहुन्छ । अब तपार्इलार्इ यस्ताे टेन्सन देखी मुक्त गराउनकाे लागी हामी लिएर अाएका छाै विशेष उपाएहरू । लामाे अनु...
© 2018 Designed by Dreaming Suju